Voadika ny 09 Desambra 2011 0:41 GMT
Santiago Hoerth izay mpanangana sy mpiara-mandrindra ny Código Sur (Kaody Atsimo), dia nanao famelabelarana mitondra ny lohateny hoe “Internet Libre con Tecnologías Libres” (Aterineto malalaka miaraka amin'ireo teknolojia malalaka) ho fankalazana ny Congreso de Cultura Libre, izay natao ny 17 sy 18 oktobra tany Quito, any Ekoatora. Saika hita manontolo anaty lahatsary roa (1 sy 2) ety anaty aterineto ny fampitàna nataony . Ny fikambanana “Código Sur” dia mitono-tena ho :
Mitanisa izy ireo ao anatin'ireo tanjony :
Ny iray amin'ireo foto-kevitra noresahan'i Santiago nandritra ny resadresaka nifanaovako taminy mikasika ireo tebo-pifanakalozana tsy miandany sy ireo tambajotra malalaka. Manazava amin'ny antsipiriany momba izany izy amin'ity lahatsary manaraka ity :
Manazava amin'ny antsipiriany kokoa ny Wikipedia, mikasika ireo teboka tsy miandany ireo :
Ny lafiny ara-teknika sy fampitaovana ny sampana fifanakalozana fifandraisana eo amin'ireo samy mpanome tolotra fidirana Aterineto (FAI) dia voafehin'ireo fifanekena mikasika ny fifampifandraisana. Eo ambanin'ireo fifanekena ireo, matetika dia ifanakalozana tsy misy sarany io fifanakalozana fifandraisana io. Rehefa mitondra aminà saram-pifandraisana ny fifanakalozana iray, matetika ireto farany dia zaraina amin'ny totalimben'ireo mpandray anjara. […] Ireo anjara mifototra amin'ny haavon'ny fifamoivoizana dia tsy tena be mpahafantatra satria tsy mampiroborobo ny fivoàran'ny fizaràna tsy miandany izany.
Ny (tambajotra malalaka) Redlibre koa dia anomezana fanazavana amin'ny antsipiriany ao amin'ny Wikipedia, nefa mahaliana dia mahaliana tokoa ny tanjon'io tambajotra io :
Tahaka ny any amin'ny tetikasa rehetra, dia manana ny lanjany tokoa ny olombelona. Hahita fampahalalana bebe kokoa mikasika izany fanontaniana izany isika ao amin'ny Guifi.net, Buenos Aires Libre, Bogotá Mesh, Montevideo Libre, sy Redes Libres, izay fikambanana ivondronan'ireo tambajotra malalaka rehetra any Amerika Latina.
Hamaranana izany, niresaka mikasika ny Logiciel libre (amin'ny teny frantsay) any Amerika Latina ihany koa i Santiago:
Ho an'i Santiago, malaza be ny rindrambaiko malalaka any Amerika Latina, tahaka ny hita nandritra ny FLISOL na “Festival Latinoamericano de Instalación de Software Libre”, fankalazana isan-taona natao mba hanelezana ireo rindrambaiko malalaka ao anatin'izany kaontinanta izany. Tamin'ity taona ity ohatra dia 269 ireo tanàna nandray anjara tamin'ny fanomanana ireo adihevitra, ireo atrikasa ary koa, ny fametrahana ireo rindrambaiko malalaka samy hafa.
Código Sur dia mijery lavidavitra kokoa noho ny fijerena ny rindrambaiko malalaka ho toy ny fitaovana famoronana rindrankajy fotsiny ihany, fa fitaovana sosialy ihany koa :
Soratra mandady anaty lahatsary: Beatriz Arze, Helen Siers, sy Noemi Zalazar
Lahatsoratra mifandraika (amin'ny teny frantsay) : Espagne : Entretien avec Ignasi Labastida sur la propriété intellectuelle, Amérique latine : Un entretien avec Carolina Botero sur la propriété intellectuelle
Lahatsoratra navoaka teo aloha tao amin'ny bilaogy manokan'i Juan Arellano ny 25 Novambra 2011.